मार्च 14, 2012 मा 4:20 साँझ
TransPosh गर्न लामो जीवन, म गुनासो पनि यदि, I still use it 🙂
म त म जाँच गर्नेछ अझै नवीनतम संस्करण अद्यावधिक थिएन
मार्च 27, 2012 मा 2:27 को मा
म कुनै पनि नयाँ काम पुराना संस्करण संग तुलना थाह छैन किनभने म अब यसलाई अपडेट छैन. अनि तपाईं वास्तविक। HTML पृष्ठमा हरेक पेज बनाउन सक्छ एक समारोह जो जोड सक्छ, यो WordPress छिटो बनाउन सक्छ।.
यति यू धन्यवाद।.
मार्च 27, 2012 मा 10:53 को मा
अद्यावधिक गर्दै सामान्यतया एक राम्रो कुरा हो, छिटो बनाउने सन्दर्भमा, तपाईं एक क्यास प्लगइन प्रयोग गर्न विचार (यस्तो wpsupercache रूप) कि शायद तपाईं को लागि देख रहे सुधार हासिल गर्नेछ.
मार्च 30, 2012 मा 4:31 साँझ
म लामो समय को लागि यो प्लगइन प्रयोग. तर हाम्रो होस्टिंग हाम्रो साइट अधिभार CPU मलाई भन्नुभयो, यो प्लगइन यस समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ गर्छ?
मार्च 31, 2012 मा 2:28 साँझ
यो प्लगइनले सीपीयू समय खपत गर्छ, प्रयोग गर्दा एकदम कम हुन सक्छ, जसको एक स्मृति क्यासिङ समाधान मा समर्थित, यस्तो memcached वा रेस्टुरेन्टमा रूप
तपाईं ती बारे तपाईको होस्टिङ्ग प्रदायकले सोध्न सक्नुहुन्छ
अप्रिल 7, 2012 मा 5:26 को मा
हाय, याद, भाषा को अवस्था को परिवर्तन दर्ता अतिथि संग प्रयोगकर्ता परिवर्तन पछि.
म कसरी यो समस्या हल गर्न सक्छन्?
अप्रिल 28, 2012 मा 11:42 साँझ
म तपाईं रिपोर्ट गर्दै कुन विवाद बुझ्न यकीन छैन, म मदत गर्न सक्षम हुनु हुने त अरू बढी विवरण उपलब्ध प्रयास.
जुन 17, 2012 मा 8:02 को मा
В वि 3.4 + द्वारा Transposh 0.8.2 यो एक समस्या छैन, सम्भव कारण वि थियो.
अप्रिल 9, 2012 मा 7:07 साँझ
महान् प्लगइन, यो सुन्दर छ.
तर अनुवाद को वाक्य संरचना अनौठो छ, जब सम्पादन अर्को ठाउँमा वाक्य भागमा राख्न कुनै उपाय छ?
अप्रिल 28, 2012 मा 11:39 साँझ
तैपनि कि काम, तर parser.php फाइल को शीर्ष मा परिवर्तन गर्न सक्छ केहि स्थायी छन्, यो शायद भविष्यमा समर्थित गरेन गर्नेछ हुनत, र शायद आफ्नो वर्तमान अनुवाद अमान्य हुनेछ.
मई 2, 2012 मा 3:43 साँझ
हाय ! Just corrected the French version of your post 😉 Making your website participative isagreat idea, आफ्नो प्लगइन हो रूप!
हाम्रो भाषिक सिमाना खोल्दा मदत आफ्नो ठूलो काम को लागि धेरै धन्यवाद, र जन्मदिन मुबारक TransPosh लागि!
मई 2, 2012 मा 3:48 साँझ
ओह खैर, अंग्रेजी र फ्रान्सेली बीच बनाम संज्ञा को स्थिति. विशेषण बंद छ, र एकदम अनियमित वाक्य काटन trasposh मार्ग संग, केही वाक्य ठीक शब्द reordering को कुनै बाटो नै fuzzy sound छ… सट्टा एकदम अनियमित तिनीहरूलाई काटन टुक्राहरूमा वाक्य कटौती गर्ने ponctuation प्रयोग गर्न कुनै उपाय छ?
मई 3, 2012 मा 9:58 को मा
फ्रान्सेली संस्करण अनुवाद को लागि धन्यवाद, अत्यधिक सराहना. प्लगइन आफु को लागि त्यसै गर्न चासो?
अनियमित काटन सन्दर्भमा, यो कि अनियमित छैन, यो html संस्थानहरूले मा कटौती गर्नेछ, संख्या, punctuations र HTML. उन पार्सर फाइल मा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि नियम हो, र हामी समग्र प्रक्रिया सुधार मा काम गर्दै छन्. तपाईं उल्लेख समस्या यसबाहेक यस्ता केही भाषामा दोहोरो अर्थ र लिंग मुद्दाहरूलाई शब्दहरू सन्दर्भ सम्बन्धित समस्या छन्. त्यसैले यसको जवाफ छ “अझै पनि त्यो काम”.
टिप्पणी र इनपुट को लागि धन्यवाद
मई 3, 2012 मा 11:16 को मा
फाइलहरु संग मलाई र “कसरी” र म प्लगइन अनुवाद गर्न सक्दो हुनेछ.
अर्को समस्या: अंग्रेजी संस्करण / फ्रान्सेली एक देखा गर्दैन एक चित्र. मा जाँच गर्न http://www.sahal.fr: ENG “अलेक्जेन्डर Sahal मोहम्मद सईद देखि बारेमा” / FR “अलेक्जेन्डर Sahal मोहम्मद सईद देखि एक propos”
मई 3, 2012 मा 11:44 को मा
पहिलो, बेपत्ता चित्र बारे. तपाईंको थीम केहि भनिन्छ timthumb प्रयोग (म केहि बिंदु मा एक सुरक्षा मुद्दा थियो सम्झन जो) र पनि unneeded स्रोत खपत, म तपाईंलाई एउटा सामान्य चित्र ट्याग प्रयोग र कुराहरू शायद काम गर्नेछ सुझाव.
प्लगइन को अनुवाद सन्दर्भमा, फाइल पहिले नै तपाईं के छ प्रदान गरिन्छ, जहाँसम्म मैले यसलाई रूपमा .po / .mo files अनुवाद लागि सजिलो बाटो भनिने प्लगइन प्रयोग गर्न छ “स्थानीयकरण codestyling” जो एकदम सीधा अगाडी छ.
हामी पनि js / lang निर्देशिका मा सम्पादन इन्टरफेस लागि अनुवाद गर्न एक सानो फाइल छ.
स्वाभाविक – credit is given to translators 😉
मई 16, 2012 मा 10:46 को मा
नमस्ते मैले एक बरु रोचक समस्या भएको जस्तो लाग्छ, यो सबै भन्दा भाषाहरु जस्तै देखिन्छ (अफ्रिकी, तिब्बती र थप) समस्या दिन र मेनु वस्तु अनुवाद छैन, र शीर्षों मा सबै, र केही संग पाठ प्रतिस्थापन।. त्यसैले उनलाई केही संग बस ब्लक छन्.
मूलतः म यो cufon कारण सोचाइ थियो, तर म अनुकूलित एक पटक मेरो पूर्वनिर्धारित बाहेक सबै भाषामा लागि cufon हटाउन. तर यसको अझै पनि भइरहेका.
किन यो हुनेछ?
गुगल API कुञ्जी तय यो मुद्दा प्रयोग गर्नेछन्?
कुनै पनि मदद को लागि धन्यवाद
मई 20, 2012 मा 10:33 को मा
तपाईं गैर पूर्वनिर्धारित भाषा लागि cufon हटाउन पछि, तपाईं3पार्टी WordPress utils लागि स्वचालित अनुवाद डेटाबेस र caches खाली छ?
अमिर कोलनेक्ट भन्छन्
जुन 29, 2012 मा 2:43 साँझ
Transposh देखि भविष्य को घटनाक्रम र अपडेट खोज को लागि अगाडी. Surely it’s going to beagame changing product once complete 🙂
जुलाई 24, 2012 मा 12:45 साँझ
यो एक उत्कृष्ट प्लगइन हो…म आभारी हूँ।.
म कसरी म संभवतः अनुवाद पाठ प्रकट फन्ट परिवर्तन गर्न सक्छ सोध्न चाहन्छौं…
उदाहरणका लागि…म अंग्रेजी र ग्रीक छ भने…कसरी म ग्रीक फन्ट परिवार परिवर्तन गर्न सक्छ (एरीयल भन्न दिन्छ लागि – पूर्वनिर्धारित कारण यो एक सेरिफ परिवार संग आउछ).
यू धन्यवाद…सबै कुराको लागि…
नोभेम्बर 21, 2012 मा 10:13 को मा
तपाईंको प्लगइन ठूलो छ.
डिसेम्बर 5, 2012 मा 1:45 को मा
TransPosh-WordPress मा changeset [c4740c0]: हो, we should reset the yandex proxy counters too on change. डिसेम्बर 5, 2018
broad ocean मा संस्करण 1.0.0 – समय आयो